Kpọtụrụ nkwado nkwado
Site na ọrụ (ma ọ bụ) nke saịtị Avito, ụfọdụ ndị ọrụ ya nwere ike izute ụdị nsogbu dị iche iche n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na ịnweghị ike idozi onwe gị, enyemaka na-enyekwa na ibe pụrụ iche nke ụlọ akwụkwọ mgbasa ozi a nke ọma adịghị enyere aka, nanị ihe fọdụrụ ahapụ bụ ịkpọtụrụ ọrụ nkwado ahụ site na ịdegara ha ozi zuru ezu.
Mepụta akaụntụ na Avito
Avito bụ ebe a ma ama nke mgbasa ozi na Russian Federation. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta mgbasa ozi nke gị na isiokwu dịgasị iche iche: site n'ire ihe ịchọta ọrụ. Otú ọ dị, iji nweta ikike nke onye ọ bụla, ịkwesịrị ịnweta akaụntụ onwe gị na saịtị ahụ. Ịmepụta profaịlụ na Avito Ịmepụta profaịlụ na Avito bụ usoro dị mfe ma dị mkpirikpi, nke na-agụnye naanị ụzọ ole na ole.
Bugharia na Abito
Na ndụ nke mmadụ ọ bụla nwere ike ịbịaru oge mgbe ị chọrọ ịchọta ọrụ. N'ụzọ dị mma, na ugbu a ọ bụghị nke siri ike, ọ bụ naanị ịnweta Intaneti na akaụntụ na saịtị ọ bụla. Ihe kachasị mma ọrụ ahụ, nke ka mma. Ya mere, nhọrọ kachasị mma - Akwụkwọ ozi Bulletin.
Melite ọkwa a na Avito
Oge anyị na-ere ihe abụghị ihe siri ike. Ịntanetị jupụtara saịtị mgbasa ozi, onye ọrụ ahụ ka na-anọgide na-ahọrọ otu ịchọrọ. Mana ọ kachasị mma iji saịtị a ma ama, dịka ọmụmaatụ, Avito. N'ụzọ dị mwute, mgbasa ozi ebe a na-egosipụta nanị ruo ụbọchị 30. Mgbasa na-adị ọhụrụ na ọganihu Ọ dabara nke ọma, ị gaghị emepụta akwụkwọ ọhụrụ.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Akaụntụ Personal Avito anaghị emeghe
Ebe nrụọrụ weebụ Avito bụ otu n'ime ebe kachasị mma iji gosipụta mgbasa ozi gị maka ihe ọ bụla. Ọ na-eji ọtụtụ ndị ọrụ eme ihe. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ụdị akwụkwọ dịgasị iche iche: site na ihe onwunwe nke aka gị. Ihe na-adọrọ mmasị, ma ọ bụrụ na ọzọ, na mberede, ọ gaghị ekwe omume ịbanye na saịtị ahụ.
Ntuziaka Iweghachite Akaụntụ Avito
Mgbe ọ na-abịa na mgbasa ozi na Ịntanetị, otu n'ime mkpakọrịta mbụ na uche onye ọrụ bụ Avito. Ee, nke a bụ ịrụ ọrụ dị mfe. N'ihi na ọ bara uru, ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ya. Otú ọ dị, iji hụ nchedo kachasị mma ma zere nsogbu na ọrụ nke saịtị ahụ, a manyere ndị okike ya ịzụlite usoro iwu.
Ihichapu mgbasa ozi na Avito
Akwukwo akwukwo Avito bu ndi mara amara, ndi mmadu mara ya. Ọrụ weebụ na-enye gị ohere ire ma ọ bụ zụta ngwaahịa ọ bụla, na-enye ọrụ ma ọ bụ jiri ya. A na-eme nke a site n'enyemaka nke mgbasa ozi, mana mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa iji wepu ha.
Paswọdu na-enwetaghachi site na profaịlụ Avito
Iji chebe profaịlụ gị, onye ọrụ ọ bụla na-eji nkwupụta pụrụ iche. Na ogologo ma dị iche iche ọ bụ, mma. Ma enwere ala ebe a: ihe mgbagwoju anya nke koodu ntinye, ihe kariri ya bu icheta. Ntughachite nchịkọta na ọganihu Ọ dabara nke ọma, ndị na-emepụta ọrụ Avito achọpụtawo ọnọdụ yiri nke ahụ na e nwere usoro na saịtị ahụ maka mgbake ya, ọ bụrụ na ọnwụ.
Anyị na-achọ mgbasa ozi ndị na-anọchite anya Avito
N'ihe banyere ikwu banyere saịtị dịka Avito, ọ na-esiri ike ịlụ ụka banyere ya. Mana nke a abụghị nanị saịtị maka mgbasa ozi na-ezipụ. Nhọrọ ndị ọzọ A na-ede ndepụta nke saịtị na-enye ọrụ ntinye aka na saịtị. Otú ọ dị, ọ bụ nanị ndị kasị ukwuu n'ime ha kwesịrị nlebara anya pụrụ iche.
https://termotools.com ig.termotools.com © Avito 2020